औ’षधिबिना नै मिर्गौलाको सफाइका लागि प्र’भावकारी यी ३ चिज ! – Online Saptarangi
October 15, 2020 Prakash WaibaLeaveaComment on औ’षधिबिना नै मिर्गौलाको सफाइका लागि प्र’भावकारी यी ३ चिज !
मिर्गौलाले हाम्रो शरीरलाई डि’टक्सिफाइ गर्ने काम गर्दछ । यसले फोहोर, वि’षाक्त र अ’तिरिक्त तरल पदार्थहरू शरीरबाट बाहिर पि’साब मार्फत फाल्ने गर्दछ ।शरीरमा र’गत शुद्ध पार्ने मिर्गौलाहरू सफा भएनन् भने, यु’रिनरी डि’सअर्डरसहित पेट दुख्ने, ज्वरो र बान्ता हुने जस्ता ग’म्भीर स’मस्याहरू बढ्न सक्दछन् । यतिमात्र होइन, मिर्गौलामा भण्डार भएका वि’षाक्त पदार्थहरूले र’गत शुद्धिकरणमा बा’धा पुर्याएर व्यक्तिको मृ’त्युसमेत हुन सक्दछ ।
यी सबै स’मस्याबाट मु’क्त हुनका लागि खानामा सावधानीका साथ आहारमा तीन राम्रो चीजहरू प्रयोग गरियो भने किड्नीको सफाई सजिलैसँग गर्न सकिन्छ ।ती आहालाई व्यक्तिले पकाउन अथवा पे’य प’दार्थका रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।खानाको स्वाद बढाउन धनियाँ प्रायः प्रत्येक भान्छामा प्रयोग गरिन्छ । धनियाँमा रहने डि’टोक्सिफिकेसनका गुणहरूले शरीरबाट फोहोर र वि’षाक्त पदार्थ ह’टाउन मद्दत गर्दछ ।
धनियाँलाई खानामा अथवा रसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।दाल आदिमा झा’न्न्का लागि अथवा टे’म्परिंग गर्न प्रयोग गरिने जीरा पनि मिर्गौला सफा गर्न धेरै फा’इदाजनक हुन्छ । जीरा र धनियाँ ४५ टुक्रा कागती मिलाएर एक डि’टोक्सिफ ड्रिं’क घरमा तयार गर्न सकिन्छ । मृगौला सफा गर्नका लागि यो पे’य पदार्थ धेरै प्रभावकारी छ ।
प्रायः तपाईंले मानिसहरू मकैलाई मुख्य खाद्यान्नको रुपमा प्रयोग र्दै आएका छन् । तर, मकैको दानामा देखिएको सुनौलो रेशाहरूले मिर्गौलालाई डि’टोक्सिफाई गर्न सक्छ भन्ने कुरा धेरै कमलाई थाहा छ । मृगौला र मू’त्रथैली डि’टक्सिफाइ गर्नुका साथै यसले र’गतमा चि’नी नियन्त्रण गर्न र प्र’तिरोधक क्ष’मता बढाउन पनि प्रभावकारी काम गर्दछ ।
विज्ञहरूकाअनुसार जब कुनै व्यक्तिको मिर्गौलाले शरीरमा पर्याप्त र’गत फि’ल्टर गर्न रोक्छ, तब यसलाई किडनी फे’लियर भनिन्छ । उच्च र’क्तचाप (म’धुमेह), ग्लो’मेरुलोनेफ्राइटिस (र’क्त फि’ल्टर गरिएको भागमा हुने क्ष’ति) अथवा पथ्थरी कारणले मृगौला ख’राब हुन सक्दछ ।